Iikhowudi ze-psn zamahhala | Ukukhuphela i-psn code generator | Iikhowudi ze-psn zekhadi ezisebenzayo
ikhaya // Blog // Free psn iikhowudi
I-100% YOKUSEBENZISWA KWEZEMPAHLA ZEZIKHARITYHULAM ZEZIKHARITYHULAM
Ngaba bekungeke kupholile ukuba unokufumana izinto mahhala? Ngaba unomdla wokufumana into ngokuchofoza nje iqhosha? Uninzi lwabantu baphandle nje ngoku luhamba ngokukhawuleza kwamakhredithi okanye mahhala kwiikhowudi ze-PSN kwi-intanethi. Bethu i-PSN ye-generator code, iziphumo zinyani ziqinisekisiwe!
Inkonzo ye-PSN inikezwa ngu-Sony kwi-Digital media entertainment industry. Emuva ngoNovemba 2006, xa yafunyanwa kuphela kwiingqungquthela ze-Sony PlayStation, akukho mntu wayesazi ukuba yayiza kuba yithandwa ngokubanzi. Kamva, kwakufikeleleka nge-Blu-ray abadlali, ii-smartphones kunye nee-TV ze-HD. Abantu abangaphezu kwezigidi ze-130 basebenzisa isevisi ye-PSN njengangoku kwaye inani liya kuhlala likhula kuphela. Ukuphucula isipiliyoni somdlalo we-gameplay yisona sizathu esibalulekileyo sokusetyenziswa kwale nkonzo kunye ne-PSN ijolise ngokukodwa kwi-intanethi ye-PlayStation esitolo se-Marketplace.
Isikhokelo somsebenzisi kunye nobungqina
Ngoko yintoni iikhowudi ze-PSN?
Ukuba unjalo uhlobo lwabafundi abaye bawela ngaphaya kweli gig ngephutha, nantsi ingcaciso ethile ngesihloko. Iikhowudi ze-PSN zisetyenziselwa kuphela iqonga le-PlayStation. (Kulungile, i-duh!). Yikhowudi equlethe idibaniselwano eyahlukileyo yamanani kunye namanani angasetyenziselwa ukufumana uhlobo oluthile lomvuzo. Unokufumana inzuzo yobulungu ukusuka kwenyanga ukuya kwiinyanga ze-12. Yintoni oyivulayo ukufikelela kwimidlalo eyahlukeneyo yamahhala kunye nenethwekhi ye-intanethi ye-PlayStation. Ikhowudi ye-PSN ingasetyenziswa kuphela xa ingazange isetyenziswe ngaphambili. Umntu we-1 kuphela uza kusebenzisa kunye nekhowudi ethile. Emva kokuba ungene kwi-akhawunti yakho ye-PlayStation, ungaya kwicandelo levenkile ye-PlayStation uze ufake ikhowudi yakho apho. Oku kuvula iinyanga zokufikelela kwiimidlalo ze-PlayStation kuxhomekeke kwixabiso lekhadi lakho le-PSN.
Ixesha lokufumana iikhowudi zamahhala!
Kukho amaziko amaninzi ngaphandle apho ibango linikezela iikhowudi ze-PSN ezisebenzayo okanye unayo i-PSN ye-generator code ngokuqhelekileyo ijwayele ukukhwela i-PlayStation peeps. Uninzi lwawo, nangona kunjalo, azinamatheli kumabango abo kwaye iphelisa ukuchitha ixesha lakho elixabisekileyo okanye ukufaka intsholongwane enobungozi engonakalisa inkqubo yakho. Ngenxa yoko, uphela ungenayo ikhowudi ye-PSN kwaye ugqibe ukulimaza ikhompyutha yakho. Kwakhona, enye into ecasulayo enokuyigqiba iya kuba yimibuzo engapheliyo yokufumana iikhowudi. Uninzi lwexesha ekupheleni kolu vavanyo, mhlawumbi ziphela zithi ungakufanelekanga okanye uza kujamelana nesibetho sakho esibi kunazo zonke, AKHO AMAKHODI!
NJE! Oku akunjalo nathi njengokuba ukwaneliseka lwakho lonwabo. Siqinisekisa amava ekhuselekileyo ngokupheleleyo kunye neefayile zePNN ezisebenzayo ezinokuzikhuphela kwiSitolo seSewStation.
Kutheni kufuneka usebenzise inkonzo yethu? Yilula elula:
Isizukulwana sethu sithuba sincinane kakhulu xa siqhathaniswa namanye amasayithi. Iikhowudi ezinokukhawuleza kwaye zikhuselekile ngaphandle kokuhlawula nayiphi na intengo. Ilungelo elimangalisayo?
Akukho nto yokukhuphela ukuze uvelise iikhowudi ze-PSN zamahhala loo msebenzi! Senza iikhowudi kumaseva ethu. Hassle amava akhuphayo kwaye akhuselekileyo. Amaseva ethu agcinwa kakuhle, ngoko sinokuqiniseka ngomphumo omangalisayo!
Iinkonzo zethu ziya kuhlala zikhululekile. Iikhowudi ezintsha kunye nezitsha zifumaneka kuzo zonke ukuhlawulela. Iinkonzo ezisezantsi kufuneka zingalindelanga kulinye icala. Asisoze sithatha. Senza ngendlela yokuzila!
Kukho iindlela ezahlukeneyo ozikhethayo. Amahlelo amakhadi ethu aya kwiintlobo ze-10 $, i-20 $ kunye ne-50 $. Zive ukhululekile ukukhetha ikhadi olifunayo kwaye lakho konke!
Ngokungafani nezinye iindawo zokukhohlisa apho zivele zivelise iisethi zamanani, sithenga amakhadi we-PlayStation kwaye sisasaza kubasebenzisi bethu abathandekayo njengoko imali yethu ingeniso.
Awunakuxhalabisa malunga neendlela eziqhayisayo. Asinayo imiyalezo yokuvakalisa isikhangiso nangona imali yethu engenayo ivela kwiintengiso kuphela. SO akukho miba malunga naloo nto!
Iinkonzo zethu zifumaneke phantse kuwo onke amazwe okudlala aneziko elifanelekileyo lomsebenzisi. Ngoko abadlali beendawo ezahlukeneyo zehlabathi badinga ukuxhalaba ngaloo nto. Zonke zanyamekelwa. J
YINI OKUYAWALELA ?!
Ngentloko nje yethu i-PSN ye-generator code kwaye nqakraza ukuvelisa! Ngaba ingaba lula kunoko? Isikhathi sokulinda singaphantsi kwemizuzwana ye-30. Kuqhelekile ukuba ngaba abadlali beqabana bayathandabuza. Kuqondakala ngokupheleleyo ngenxa yenani elikhulu lewebhu. Ngoko kutheni ungayifuni kwaye uyibone?
IINKCODA ZAMAHLA EZIPHAKATHI YONKE! Ukukhawuleza, Ukhuselekile, ukhuselekile kwaye uthembeke! Abaqhwaba basibona sibetha, bazondayo!
49 Comments " Iikhowudi ze-psn zamahhala "
akho gama kwi7: 50 pm - impendulo
Andizange ndibone into enje
Ukunyaniseka kwi7: 52 pm - impendulo
Ndiyabulela kakhulu ukusebenza okuhle ukuqhubeka
Bill Tommy kwi3: 38 pm - impendulo
UNKULUNKULU. NAKUBA NAMAKHONO!
Woody kwi6: 34 am - impendulo
Omnye Owona kwi9: 27 am - impendulo
Ukusebenza kwikhadi lesipho le-50 USD, vumela ubone ...
Homulus kwi2: 15 pm - impendulo
BMWFan kwi7: 30 am - impendulo
umthi wekrisimusi kwi7: 15 pm - impendulo
Emil kwi10: 36 am - impendulo
umva le nkqubo ithatha looooong
Emil kwi10: 39 am - impendulo
URamen kwi7: 34 am - impendulo
kuthatha ixesha kodwa ekugqibeleni lisebenza
Anthony kwi10: 05 am - impendulo
Fred kwi6: 24 am - impendulo
Bhala kwi7: 35 am - impendulo
uyayibonga kakhulu indoda!
UKumkani uArtur kwi6: 39 am - impendulo
hamza kwi2: 35 am - impendulo
igama lomsebenzisi we-ps4 elitebro786 nceda ndenzele kum.
i i turtles kwi10: 49 am - impendulo
I-3 isebenza ngekhowudi ye-psn, ayifumani nanamhlanje
zonne kwi8: 23 am - impendulo
Abafazi baya ekhitshini kwi1: 28 pm - impendulo
Yonke into oyifunayo, uyifumane, yonke into oyifunayo uyifumene nayo, nantoni na yakho konke
I-Legit, kulula kwaye ikhawuleze kwi10: 35 am - impendulo
I-Legit, kulula kwaye ikhawuleze
Ekhohlisayo kwi7: 07 pm - impendulo
I-COTE YOMTHETHO OMUNYE WAMANYE
Demilo kwi10: 57 pm - impendulo
Foxy_foire kwi9: 22 am - impendulo
OMG, OMFG: () () () () () () () () ()
terminator kwi6: 31 am - impendulo
Yamkela ikhowudi yam: 3
Tron kwi4: 57 pm - impendulo
Iikhowudi ze-3 namhlanje 😀 looooooooooooool
psnmaster kwi5: 36 am - impendulo
Ndifumene iikhowudi zam psn
Inyoni kwi7: 11 pm - impendulo
Ndithenge enye imidlalo:>
Dude_pls kwi1: 33 pm - impendulo
Unokundinceda? i-skype yami i-terminator2001
tron kwi1: 54 pm - impendulo
Ndiyabonga kakhulu (y)
i-asam kwi8: 17 am - impendulo
Tjokyo kwi10: 35 am - impendulo
lungile, ngoku ndivuya kakhulu 🙂
Bontager kwi11: 32 am - impendulo
tan kwi5: 22 am - impendulo
Dariyo kwi7: 29 am - impendulo
Ikhuphe ngokuphumelelayo ikhadi le-50 ikhadi lesipho: p
Miyagiy kwi7: 47 am - impendulo
Ndiyayixabisa kakhulu le khokelo
karakam kwi7: 59 am - impendulo
Unamakhadi wesipho samahhala kubangani bam kunye nalokhu
Robby kwi8: 16 am - impendulo
1337 kwi9: 44 am - impendulo
babel kwi11: 35 am - impendulo
IBhabheli kwi8: 43 am - impendulo
bafana, ndinekhowudi yokusebenza evela apha!
i grador kwi10: 58 am - impendulo
Derik kwi8: 51 am - impendulo
Budhasa kwi8: 51 am - impendulo
darh kwi12: 09 pm - impendulo
Galan kwi3: 18 pm - impendulo
Ndiyavuya kukuba ndifumene le website
krush kwi4: 28 pm - impendulo
ps4 kwi6: 28 pm - impendulo
okanye kwi4: 52 pm - impendulo
i prawn kwi2: 57 pm - impendulo
Kuzwakala kuhle kakhulu ukuba kuqiniswe okokuqala